Utyala phi kwimarike yemasheya | Ezezimali
Ukugqiba apho uza kutyala imali kwimarike yemasheya kunzima ukuba awuzazi iinjongo ekufuneka zilandelwe. Ngamanye amaxesha ndikufumanisa kunzima ukugqiba ukuba ndenze ntoni na ngokwam, hayi kuba ndingenazo izimvo, kodwa kuba ndilinde ixesha elifanelekileyo. Ukongeza, inyani yokuba asilulo lonke utyalomali olunengqiqo efanayo. Abanye bagqitywa lixesha labo, abanye lixabiso elityalomali, kwaye kunjalo nenjongo yotyalo-mali. Awafani onke.
Uncedo olukhulu lwangoku, ngaphandle kwengxaki yehlabathi, yile Uninzi lweemveliso zesitokhwe ziyafumaneka kuluntu nje. Kwaye ukuba asinakho ukutyala imali kwinto esiyifunayo ngokuthe ngqo, sinokuyenza ngezinye iindlela. Umzekelo, i-ETF iyakwazi ukusombulula inxenye yezi ngxaki ezifunwa ngumtyalomali omncinci. Ezinye zazo zinxulumene notyalo-mali kwii-indices, iibhondi zikarhulumente, ethi ngendlela yesiko ibinzima ngakumbi kwaye ifuna iimali ezinkulu. Ngesi sizathu, kwaye ngokunxulumene namaxesha akhoyo, siza kubona ukuba zeziphi iindlela esinokukhetha kuzo kunye nalapho sinokutyala khona kwimarike yemasheya ngokweenjongo ezilandelelweyo.
1 Izinketho zokwazi ukuba ungatyala phi kwimarike yemasheya
2 Yintoni omele uyiqwalasele xa ukhetha indawo oza kutyala kuyo imali
2.1 Umahluko phakathi kotyalo-mali kunye nokuthelekelela
Izinketho zokwazi ukuba ungatyala phi kwimarike yemasheya
Kukho uluhlu olude lweemveliso kunye nezinto onokukhetha kuzo kwihlabathi lokurhweba. Phakathi kwezinto esele zikhona ukwazi ukuba yeyiphi na efanelekileyo kuthi apho siza kutyala imali kwimarike yemasheya kukho oku kulandelayo:
Forex: Yeyona ntengiso yangaphakathi isasazwa kwimarike. Yazalelwa ukuququzelela ukuhamba kwemali okuvela kurhwebo lwamanye amazwe.
Iimpahla ezingekasilwa: Kweli candelo singafumana izinto eziphambili ezingasetyenziswanga kwimveliso enje ngobhedu, ioyile, ihabile kunye nekofu. Kukho nakweli candelo isinyithi esixabisekileyo esifana negolide, isilivere okanye ipalladium.
Izenzo: Yeyona yaziwa ngokugqwesa. Kolu hlobo lweemarike sinokuthenga "iinxalenye" ​​zeenkampani kwaye sixhamle kwindaleko yazo okanye siphulukane nazo. Yonke into iya kuxhomekeka kwinkampani ethe izabelo zayo zithengiwe. Sinokufumana ii-indices zamazwe ezinje nge Indiya .
Amatyala, iiBond kunye neziBophelelo: Le ntengiso ibonakaliswa kukuthengwa kunye nokuthengiswa kwamatyala, kumashishini nakurhulumente.
Iziphumo zezemali: Ziimveliso ezixabiso lazo lixhomekeke kwixabiso lenye i-asethi, ihlala iphantsi. Zininzi iintlobo zazo, iiCFD's, uKhetho, ikamva, iiMvume ...
Utyalomali: Ezinye zazo zilawulwa ngumntu, ezinye zi-algorithms, kwaye ezinye zenzekelayo eziziphindaphinda ii-indices okanye iinkqubo zesicwangciso-mali. Ezona zithandwa kakhulu zihlala zisebenza kunye nezitokhwe, kodwa zinokuzinikezelwa kwezinye iimveliso ezinje ngezinto ezingavuthwanga.
Yintoni omele uyiqwalasele xa ukhetha indawo oza kutyala kuyo imali
Kukho izinto ezahlukeneyo eziya kuthi zichonge indawo yokutyala imali kwimarike yemasheya. Ixesha lexesha lotyalo-mali esizimisele ukulunyamezela, inqanaba lenzuzo esiyilandelayo, umngcipheko esizimisele ukuwuthatha, njl.
Ixesha elibekiwe: Inxalenye enkulu yeefilosofi ezahlukileyo zotyalo-mali zingafunyanwa kwi-horizons esizibekele zona. Zikho ke ukusuka kwixesha elifutshane ukuya kwixesha elide. Ixesha elide olo tyalo-mali lubekelwe umlinganiso, amathuba okuba kuhlala kungalahleki kutyalo-mali. Nangona kunjalo, lo mbono mkhulu unombono wokuba asinakuba nayo imali kwakamsinya. Ukuqinisekisa ukuba inkunzi iyasebenziseka ukuze siphile, iya kusinceda siziqonde ukuba zeziphi izinto ezinokutshintsheka okwexeshana
Inzuzo: Inqanaba lenzuzo elandelwayo lingahluka ngokuxhomekeke kwinkampani nakwicandelo elichaphazelekayo. Ukusebenza ngenqanaba elithile lokuphakamisa akufani notyalo mali olumiselweyo. Le bhonasi yenzuzo ihlala ihamba nomngcipheko ophezulu. Kwintsebenzo enegalelo, imali eyinkunzi inokulahleka okanye iphindwe kabini, ngelixa kowesibini, ukusebenza kwengeniso esisigxina, akunakulindeleka (akunakwenzeka) ukuba enye yezi meko zenzeke. Kwelinye icala, inzuzo inokufunyanwa ngokujonga ixesha elide, okanye nakwiinkampani ezinokubaluleka kokukhula kwazo. Ukwazi apho utyala khona ukuze ufumane inzuzo kunengqondo kakhulu.
Umngcipheko: Zeziphi ilahleko esikulungeleyo ukuzithabatha ngenxa yeenzuzo ezinokubakho? Utyalo-mali olujolise kwixesha elifutshane alufani nexesha elide. Zininzi iziganeko ezinokuthi zenzeke kwixesha elide, umngcipheko uhlala ukhona. Nangona kunjalo, kukho amatyeli athile enza ukuba ixabiso leasethi litshintshe kwixesha elifutshane, ke kubalulekile ukuba sazi ukuba singaya kude kangakanani. Kuya kufuneka usukele umngcipheko omncinci, ukuze uqiniseke ngokuzuza, kodwa ukuba umngcipheko mkhulu, kufanelekile.
Umahluko phakathi kotyalo-mali kunye nokuthelekelela
Okokugqibela, kwaye buqu yeyona nto ibalulekileyo, kubalulekile ukwahlula utyalomali kwingqikelelo.
Ukuqikelela kukuthenga okanye ukuthengisa nayiphi na i-asethi kulindeleke ukuba inyuke okanye yehle kwixabiso kwikamva elithile. Ke, indima yomqambi kukulindela ixabiso elizayo lemveliso ayithengileyo. Ukuchaneka kokuchaneka, kokukhona iziphumo zingcono. Olu hlobo lokuhamba luhlala luphawulwa ngohlalutyo lweemeko, imeko yohlalutyo lobuchwephesha, okanye nasiphi na isibonisi okanye isizathu esenza ukuba ixabiso lilindelwe. Umzekelo, ukuthenga igolide kulindeleke ukuba inyuke okanye ifake i-odolo yokuthengisa kwi-Eurodollar kulindeleke ukuba i-euro ilahlekelwe lixabiso, idola izakufumana ixabiso, okanye zombini.
Utyalo-mali luqhele ukuthengwa kweeasethi kulindeleke ukuba kungeniswe imbuyekezo ephezulu Kwimali eyinkunzi. Ukuba intelekelelo ithanda ukuba yexeshana elifutshane (akusoloko kunjalo, kukho iingcinga zexesha elide), utyalomali luthanda ukujonga ixesha elide. Okwangoku umtyali mali wenza ubalo olufanelekileyo apho azama khona ukufumana imbuyekezo kwikapitali kwaye emqinisekisa ngalo. Ukuba injongo ifezekisiwe, ii-asethi ezithengiweyo zinganyuka ngexabiso ukuze ngexesha lokuthengisa zivelise le nzuzo ye-capital njengakwimeko yomqambi. Njengomahluko, imbuyekezo osenokuba uyifumene, njengakwimeko yeenkampani ezininzi ezidwelisiweyo, kukufumana iintlawulo ezihlawuliweyo ngohlobo lwezahlulo. Rhoqo ekuhambeni kwexesha kuya kufuneka kongezwe kwinzuzo eyinkunzi, ukubona imbuyekezo iyonke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Utyala phi kwimarike yemasheya
Ingxowa mali engxamisekileyo